Webtalk I-FAQ - 💌 WebTK - Isitifiketi sakho kuya WebTalK 🚀 Mema, Buyekeza, Izindaba nokuningi 🔥
Will Webtalk ube ne-cryptocurrency yayo?
Webtalk kuzoba neyayo i-cryptocurrency ebizwa ngokuthi i- Webtalk Imali. Ngo 2018, Webtalkumsunguli U-RJ Garbowicz uthe bebehlela ukubeka wonke ama-akhawunti ahlobene kwiBlockchain Technology ngezinkontileka ezihlakaniphile ukuze zithengiswe futhi zidluliselwe njenganoma yiliphi elinye ibhizinisi. Funda lokhu okuthunyelwe ngolwazi oluthe xaxa mayelana Webtalk Imali.
Will Webtalk ukwamukela i-Virtual / Namaqiniso ukungathandwa kwabathelisi esikubona (VR / AR)?
Ngokuvumelana ne lo msebenzi, Webtalk izinhlelo zokusebenza eduze Ukuhleleka komlingo, inkampani yokuqalisa ekhethekile engokoqobo ukungathandwa kwabathelisi esikubona.
Ubani ngemuva Webtalk?
Nini Webtalk ihunyushwe ngolimi lwami?
Yiluphi ulimi lwezinhlelo olwenzayo Webtalk Sebenzisa ngaphakathi?
Webtalk isebenzisa i-Angular neNativescript ekugcineni. Ngemuva kokuphela, Webtalk lithembele ku-Clojure, Node, OrientDB, NginX, Docker, AWS, Beanstalk, S3, usawoti, i-ElasticSearch ne-Jenkins.
Webtalk yinsizakalo yokuxhumana nomphakathi yesizukulwane esilandelayo ekunika ukulawula emuva kwe:
Ifaka ukuphathwa kobudlelwano obusezingeni eliphezulu nobungcweti futhi inikezela ngohlelo oluhlukile olunenzuzo kakhulu olubizwa ngeSocialCPX.
Webtalk, Inc. yinkampani yokuxhumana nabantu esebenza eTampa, eFlorida, e-USA. Yasungulwa ngonyaka ka-2011 ngu-RJ Garbowicz's, oyi-CEO yamanje, kanye noJeff Catherell, u-Andrew Peret, uBasiliit Hussain noJamie Pews. Ngokuhlanganisa ngokungabonakali izici zokuphatha zenethiwekhi yomuntu siqu nezomuntu siqu, Webtalk ihlose ukufaka esikhundleni i-Facebook ne-LinkedIn.
Webtalk yinkampani yobuchwepheshe besoftware yedatha enkulu egxile kwimayini yedatha esekwe ebudlelwaneni, isitoreji, kanye nobuchwepheshe bokusesha amandla esizukulwaneni esilandelayo sokuxhumana nesoftware yezentengiselwano.
Kusetshenziswa inqubo yokulembulula yedatha yokulinda patent (AKA SocialCRM), Webtalk ikwazile ukuphindisela ukuphathwa kobudlelwano be-inthanethi ngokusebenzisa ulwazi lomsebenzisi olungalingani embonini. Ukwakha isigaba esisha ngokuphelele somkhiqizo ukuphatha oxhumana nabo, ukuxhumana kanye nokuqukethwe ngaphandle komthungo, bobabili uqobo nangobungcweti.
Webtalk kuyinjini yokusesha evumela abasebenzisi ukuthi baxhumane, bahlanganyele futhi babambe iqhaza emisebenzini ye-e-commerce.
Ngokusho kuya Webtalkumsunguli Webtalk URJ Garbowicz: “Webtalk ngumhlaba obonakalayo olawulwa ngumsebenzisi ngamunye nezintshisakalo zawo. Inethiwekhi yokuphatha ubudlelwano, inethiwekhi yokuphatha ukuxhumana, iyinethiwekhi yokuphathwa kwabathintekayo, iyinethiwekhi yokuphathwa kokuqukethwe… futhi kungekudala kuzoba ukusebenzisana, ibhizinisi, ukuqasha kanye nenethiwekhi yokuphatha ezitolo… ”
Webtalk iyipulatifomu yamabhizinisi kasomabhizinisi edijithali.
Webtalk ubuchwepheshe obuphazamisa kakhulu be-21st Century. I-RJ Garbowicz, 2019 / 10 / 03
Webtalk ingenye yezinhlelo zokusebenza ezikhula ngokushesha kakhulu zabathengi / zebhizinisi nezinhlelo zokuphatha ubudlelwano online.
Webtalk ukuxazulula izinkinga ezinkulu ze-inthanethi ezimbili emhlabeni:
UKUHAMBISANA koxhumana nabo, ukuxhumana nokuqukethwe FUTHI…
Ukuhluleka Kokulawulwa kobudlelwano bakho, izindaba, okuqukethwe, ubumfihlo…
Webtalk iyinhlangano ye-ecosystem yedijithali enikeza ukusebenza okulandelayo:
Ukuxhumana Kwabantu Ngobungcweti + nokubloga
Imeyili / Imilayezo / Izincwadi zezindaba /
Ukuphathwa kwe-CRM / Ukuxhumana
Ukuphathwa kokuqukethwe / Isitoreji sefu
Ukulinganisa / Ukubuyekeza / Izincomo
Indawo yemakethe (imikhiqizo / izinsizakalo / okuqukethwe / izinhlelo zokusebenza) (UKUQALA KUKHULU)
I-eCommerce / Amawebhusayithi e-DIY (AZA KUKHULU)
Imicimbi / I-Meetups / Umtholi Womngani (UKUBA KUKHULU)
Ukukhangisa (i-CPM, i-CPC, i-CPA / i-CPX, i-CPD, i-CPV) + i-Analytics + i-KPIs (IYAZA ISONO)
Webtalk kuyindlela entsha yezenhlalo neyebhizinisi eyabelana ngokufana ne-Facebook, LinkedIn ne-Amazon ngokulandelana. Inohlelo oluhlobene nobumbano olubizwa ngeSocialCPX.
Is Webtalk u-scam?
Asikholwa Webtalk isikweletu: inkampani ngemuva Webtalk uhlala eFlorida, ubhaliswe ngokusemthethweni eDelaware, futhi ubesebhizinisini iminyaka engu-8, etshalile imali engaphezulu kuka- $ 8M ukusukela ngo-2019.
Webtalk ikhiphe izinkokhelo zayo zokuqala zekhomishini ngo-Agasti 2019, lapha obunye ubufakazi benkokhelo yokuqala. Okwamanje awukho umbiko wamakhomishini angakhokhelwa.
Ngaphezu kwalokho, Webtalk ine izimiso zokuziphatha eziqinile nokuqinile imodeli yebhizinisi okubuye kuphinde kugqugquzelwe ukuphikisana nomkhonyovu.
Ungajoyina kanjani Webtalk?
Kulula ukujoyina Webtalk. Konke okudingayo yiya ku ikhasi lokubhalisa, faka igama lakho, ikheli le-imeyili, inombolo yeselula, iphasiwedi, usuku lokuzalwa. Ukuqeda inqubo yokubhalisa, kuzodingeka uqinisekise ikheli lakho le-imeyili. Ukuze ujoyine iqembu elihle kakhulu Webtalk, qiniseka ukuthi ufake i- "STAR" lapho ubuzwa ukuthi ngubani okumemile. Lokhu kuzokunikeza izinzuzo eziningi ezifana nebhonasi yokwabelana ngeqembu engama-50%.
Ungajoyina kanjani i- Webtalk Ithimba lezinkanyezi?
Kunezindlela ezi-3 zokujoyina i Webtalk Iqembu Lezinkanyezi:
Joyina iqembu lethu ngqo ngokubhalisa Webtalk sisebenzisa esinye sezixhumanisi zethu zesimemo noma ukungena ku- "STAR" lapho ubuzwa ukuthi ngubani okumemile. Isixhumanisi sethu esiyisisekelo webtalk.love futhi ungabhalisela ngokuqondile kusuka Iphrofayili kaJLK. Ukuqinisekisa ukuthi ubhalisa eqenjini elifanele, hlola ezansi kwekhasi lokubhalisa: kufanele ubone okuncane: “Ubumbano lobunikazi: inkanyezi (6629702)”
Uma usujoyinile Webtalk kwelinye iqembu, usengaba “yilungu lokutholwa” le Webtalk Iqembu Lezinkanyezi ngo ukukhokha imali yesikhathi esisodwa ka- $ 20 ukusukela manje (Imali izokwenyuka ngokuhamba kwesikhathi). Lokho kuzokunikeza isikhundla sesilungu sezinkanyezi ezi-2 ngezinzuzo ezifanayo zamalungu ethu "abomdabu". Sithinte ku
* i-imeyili evikelwe *
uma ngabe unesifiso sokujoyina iqembu lethu ngale ndlela.
Indlela yesithathu yokujoyina iqembu lethu, uma usungenile Webtalk, kukuthi senze okuthile okuhle impela, njengokukhangisa "webtalk.love"Ngendlela enobuchule nephumelelayo, okuholela ekudluliseleni okungu-10 kithi (ubufakazi obudingekayo). Lokho kuzokunika isimo selungu lezinkanyezi ezi-2 nazo zonke izinzuzo ezihlobene. Sithinte ku
Isigaba: Team Webtalk Stars
Ungathola kanjani imali Webtalk?
Kulula ukuhola ngayo Webtalk: okudingayo nje ukumema abasebenzisi abasha ukuthi bajoyine besebenzisa izixhumanisi zakho zokudlulisela. Uzobe usuthole i-10% ikhomishini kuyo yonke imali eyenziwe ngokudluliselwa impilo yakho yonke. Lokhu kufaka:
Amakhomishini wesitolo seSwag
Ngaphezu kwalokho, uma ufanelekela ibhonasi eyizinga le-5, uzothola i-10% ikhomishini kuyo yonke imali eyenziwe ngabathunyelwa Amazinga we-5 ajulile. Hlola wethu Wokubala online ukulinganisa amandla akho okuthola.
Okokugcina kodwa uma kungenjalo Webtalk Iqembu leSky, ungathola u- $ 1,000 10 ongeziwe ngenyanga uma umeme abantu abangu-XNUMX Webtalk.
Ungayithola kanjani imali evela ku- Webtalk Ithimba lezinkanyezi?
The Webtalk Iqembu leSky esiyingqayizivele ngoba yabelana ngamaphesenti angama-50 omholo wayo namalungu ayo nezinhlangano ezisaphayo.
Ukuze uzuze Webtalk Ithimba lezinkanyezi udinga ukuthola okungenani isimo sezinkanyezi ezi-1:
Thola I-1-inkanyezi isimo ngokumema okungenani Abasebenzisi be-2 abasebenzayo* ukuze Webtalk (ubufakazi obudingekayo); njengelungu lezinkanyezi ezi-1, ungalindela ukuhola noma kuphi phakathi kwama- $ 10 nama- $ 100 + ngenyanga ngo-2025 (asikho isiqinisekiso). * (Isimo sisebenza ngonyaka ka-2020)
Thola I-2-inkanyezi isimo ngokumema okungenani Abasebenzisi be-10 abasebenzayo* ukuze Webtalk (ubufakazi obudingekayo); njengelungu lezinkanyezi ezi-2, ungalindela ukuhola noma kuphi phakathi kwama- $ 100 nama- $ 1000 + ngenyanga ngo-2025 (asikho isiqinisekiso). * (Isimo sisebenza ngonyaka ka-2020)
Thola I-3-inkanyezi isimo ngokumema okungenani Abasebenzisi be-50 abasebenzayo* ukuze Webtalk (ubufakazi obudingekayo); njengelungu lezinkanyezi ezi-3, ungalindela ukuhola noma kuphi phakathi kwama- $ 500 nama- $ 5000 + ngenyanga ngo-2025 (asikho isiqinisekiso). * (Isimo sisebenza ngonyaka ka-2020)
Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi isimo sokuthola noma yisiphi salezi zibalo sisebenza kuphela ngonyaka we-2020. Isibalo sokudluliselwa ukuze sithole isimo sizonyuka ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa-ke, uma isimo sesitholiwe, ngokuqinisekile (ngaphandle kokulimala okukhulu okwenziwe eqenjini lethu).
Uma ungakabi se- Webtalk Iqembu leSky, ngicela nibone Ungajoyina kanjani i- Webtalk Ithimba lezinkanyezi.
Ingabe Webtalk uhlele ukunqoba umhlaba?
WebtalkUmgomo wokugcina ukukhulisa i-Virtual Economics, ngokusho komsunguli wayo uRJ Garbowicz. Ungafunda okuningi mayelana Webtalkinhloso lapha futhi lapha.
Ikhaya - Webtalk Imibuzo Evame Ukubuzwa